I-Wisteria Lodge - yonke indawo ekhethekileyo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJackie
I-Wisteria Lodge idityaniswe neFama yabanini kwaye izimele ngokupheleleyo. Ineyayo yokungena ngaphambili kunye neyokupaka.Igumbi ngokwalo libanzi, lifakwe kakuhle, ibhedi elingana nenkosi etofotofo ngokugqithisileyo, i-en-suite ethandekayo kunye nekona yekhitshi encinci ekrelekrele apho unokwenza khona iti kunye nekofu.Kukho iiradiyetha kunye nokufudumeza ngaphantsi. Imbono esuka kumnyango wakho ozinzileyo, njengakwiBarley Cottage, ithe ngqo ezantsi entlanjeni ukuya kwiinduli ezikude.
Isidlo sakusasa seHamper sinokubonelelwa ukuba unqwenela i-£5 eyongezelelweyo ngosuku. Ikhitshi inefriji encinci ebekwe kude ukuze ukwazi ukuzisa ekhaya iitshizi ezithandekayo, inyama ebandayo kunye neziphako ezivela kwezinye zeedelicatessens ezithandekayo ozindwendwela kuhambo lwakho.
Idolophu ekufutshane yiLlandovery equlathe amagumbi eti aqhelekileyo kunye neevenkile zeboutique. Kwelinye icala kukho imigodi yegolide kunye namadama, iindawo zokugcina indalo kunye nezitiya ezigqwesileyo e-Aberglasney naseWelsh Botanical Gardens.ICarmarthenshire ikwabizwa ngokuba yiGadi yaseWales.
Unxweme olumagqagala luhamba ngemizuzu engama-40 kwaye lusondele kancinci kwiidolophu ezithandekayo zaseLlandeilo naseNewcastle Emlyn.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porthyrhyd